Jamala (i-Eurovision 2016): i-biography, ubomi bomntu, intsapho, isithombe
Ngosuku lwesithathu imbambano ejikeleze ukugqibela kwe-Eurovision 2016 ayizange iphelile. Ukunqoba kukaJamala ngoma "1944" kubangele ukungqubuzana okukhulu kwi-intanethi. Inxalenye yabaphulaphuli ikholelwa ukuba ukunqoba komculi waseUkraine kuyafaneleka. Elinye inxalenye liqinisekile ukuba uJamala uye waba yinto yezopolitiko ezandleni zabaququzeleli be-Eurovision Song Contest. Kukho nawuphi na, ophumeleleyo kwintlontle kwiintsuku ezimbalwa ezedlule uye waba ngumnye wabantu abadumileyo kwi-media space.
Usapho lukaJamala: kutheni abazali bomculi behlukanisile
UJamala ligama lesiteji somculi waseMukraine, esithathwe njenge-derived of her name: Jamaladinova. Enyanisweni, umculi oneminyaka engama-32 ubudala nguSusanna.
Nangona iJamala ibheka iCrimea ilizwe lakubo, inkwenkwezi yekamva yazalwa kwisixeko saseKyrgyz saseOsh, apho ugogo wakhe wayexoshwa ngexesha lokuxoshwa eCrimea yamaTatar.
Usapho lukaSusanna luzizwe ezininzi - unina ungumArmenia waseNagorny Karabakh, kunye noyise nguTatar waseCrimea. Udade omdala womculi utshatile ummi waseTurkey, apho ahlala khona nabantwana okwangoku.
Xa inkwenkwezi ezayo yayineminyaka engama-6 ubudala, abazali bakhe banquma ukufudukela eCrimea. Ngaloo xesha, amaTatars, abo iintsapho zabo zaxoshwa kwi-peninsula, abazange bathenge indawo yokuhlala apho. Ukuthenga indlu eCrimea, abazali bakaJamala bahlukana, kwaye umama kaSusanna wathenga indlu.
Njengoko kamva wabukhumbula umculi, babengowokuqala babuyela kuTatars abathengile indlu kwiNxweme yaseMzantsi:
SasinguTatars wokuqala we-Crimea owathenga indlu eMalorechensky. Xa amaTatars aqala ukubuya, anikezelwa izicwangciso kwiindawo ezingenamsebenzi, ezintabeni. Ndiyakhumbula ngokuqinisekileyo umhla xa sifike kwikamva lethu elizayo. Inkosikazi yendlu, eyayisayinele loo maxwebhu, ngokukhawuleza yaqonda ukuba yayithengise iifama kwiCrimean Tatars. Yeka indlela ekhwaza ngayo!
Ubomi bomntu bomntu waseJamali: andizange nditshatile kwaye andisayi kudibana nothando lwam
Umculi akavakalisi ubomi bakhe abucala, kwiphepha le-instagram uyakwazi ukufumana iindaba zakamuva malunga nobuchule beenkwenkwezi. Kuyaziwa ukuba uJamal akanakho umyeni, akukho bantwana, akukho mntu uyintanda. Ngelixa intliziyo yomdlali oneminyaka engama-32 ephumeleleyo ye-Eurovision ikhululekile.
Ngandlela-thile umculi wathi kwakukho umntu osemncinci ebomini bakhe, ngaphandle kokuthi wayeziva engalunganga. Nangona kunjalo, nabani na obangela ukuba uJamal ahlupheke ngqondweni engaziwa.
Le nyaniso malunga nobomi bukaSergei Lazarev abuyi kuboniswa kwiTV. Mkhangele apha .
USergey Bezrukov watsho ngobudlelwane bakhe kunye nomfazi wakhe wangaphambili
U-Borodin uhlola u-Kurban Omarov kumtshini wamanga
U-Julia Vysotskaya akawakhumbuli umhla womtshato wakhe
Ibhinqa, indoda ye-scorpion-indlela ehlangene ngayo
Ukupheka kwee salads zokutya zasemanzini
Kwi-pulse yesitayela: iqoqo elitsha leikhiyi e-Nolte Küchen
I-sauce ye-Blue cheese
Wathinjwa kwi inkukhu ye-kefir kunye namazambane
I-tomato pie ene-icing creamy
Shish kebab juicy
Ukuqokelela kweengxowa kunye neenkcukacha zeDeor Dior ezivela kuMarc Quinn kwi-Dior
Isinkwa se Banana